Istuudiyaha Ramotion wuxuu muujinayaa habka loo sameeyo astaanta | Abuurista khadka tooska ah
Nidaamka sameynta astaan ​​ka qalin qalin illaa foomka ugu dambeeya
Wax ka yar shan iyo toban maalmood ka hor waxaan fursad u helnay inaan marinno hal abuur abuurista astaan gacanta mid ka mid ah nashqadeeyayaasha hadda ugu wanaagsan sida waa Aaron Draplin. Fiidiyow aan ku arki karno sida naqshadeeyehani uga keenayo waxa ay tahay fikradda iyo waxa loo raadinayo foomka ugu dambeeya ee astaanta astaan ​​gaar ah.
Maanta waxaan fursad u leenahay in aan ugu soo dhowaanno hannaanka hal-abuurka ee sameynta astaan ​​kale, taas oo aan ku xaqiijinno muhiimadda ay sawir si aad u sameysid sawirro kala duwan si qaabka ugu dambeeya loo ogaan karo.
Laga soo bilaabo istuudiyaha Ramotion waxaan aad u nasiib badanahay in aan marin u helno howshan halka ay ka bilaabmeyso sawirida faashash yar oo fudud iyo qaab wareegsan, si aan u helno xariiqyo iyo qaabab uu sawirka ugu horeeya la imaan doono.
Tan markii hore la hindisay, durba waa la raadinayaa qaabab kala duwan iyo xalal in lala yimaado fikradda ugu dambeysa. Marka tan la sameeyo, waxaan galineynaa dhowr fikradood oo isku xigta si ay ugu fududaato in mid uun go'aan laga gaaro, maadaama ay ku dhacdo taxanaha taxanaha ah ee aan ka heli karno khadadkaas.
Waxyaabaha soo socdaa waa saxiixa la socda astaanta oo lagu heli karo isla tallaabooyinka kor ku xusan, sawir deg deg ah si aad u hesho raadinta khadadka aad rabto inaad mar dambe buuxiso natiijada ugu dambeysa.
Dadaal weyn oo ay daraasaddan ku samaysay na tusi talaabooyinka la raaco si loo helo astaan ​​wanaagsan. Wax walba maahan inay adeegsadaan barnaamij qaabkiisa saxda ah looga heli karo gooladaha wax lagu shubo, wax badan ayaa loo maraa iyadoo la adeegsanayo qalinka iyo masaxaha si loo helo habab kala duwan Sida ugu dhakhsaha badan ee gacanta la tababaray ay u socon karto tan ma sahlana in laga helo barnaamijka nashqadeynta.
Waxaad haysaa mashruuca tan iyo Dribbble.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Nidaamka sameynta astaan ​​ka qalin qalin illaa foomka ugu dambeeya
Timothy Samara: Xeerarka 20 ee Abuuritaanka Naqshad Wanaagsan
Xirfad-xirfadeed: Mega-Pack ee ilaha lagu qiimeeyay $ 5000 ... kaliya $ 49!